Ị na-eche ihe ara bụ? Ọrịa nwere ike ịchọpụta ma gwọọ ya? Gịnị si n'ihe onwunwe pụta? Nsonaazụ nke ọnọdụ ọha na eze na ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Ọ̀ bụ “onye ara” ahụ kpatara omume ya? Ara ọ na-ekpughe eziokwu dị na ọha mmadụ na n'ime onye ọ bụla n'ime anyị? N'akụkọ ihe mere eme nile, ndị ọkà mmụta dị ukwuu, ma ha bụ ndị ọkà ihe ọmụma, ndị ọkà mmụta okpukpe, ndị dọkịta, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ndị ọkà mmụta banyere mmadụ, ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ndị na-ese ihe na-ajụ onwe ha otu ajụjụ ndị a ma mepụta echiche na ngwá ọrụ iji nye ha azịza. Na Mooc "Akụkọ nke ihe nnọchianya na ọgwụgwọ ara", anyị na-akpọ gị òkù ka ị chọpụta ha.
Na nnọkọ akwụkwọ akụkọ 6, ndị ọkachamara sitere na agụmakwụkwọ, ọgwụ na omenala ga-eweta isiokwu 6 dị mkpa iji zaa ajụjụ gị gbasara ihe nnọchianya na ọgwụgwọ ara.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ma kwado ihe ọmụma gbasara ụzọ dị iche iche isi abịa ara n’akụkọ ihe mere eme niile wee ghọta nnukwu arụmụka nke oge a gbasara ahụike uche, MOOC a nwere ike ịbụ maka gị!
Akụkọ ihe nnọchianya na ọgwụgwọ ara Ọnwa Iri na Abụọ 19, 2021Tranquillus
GỤỌ Mbipụta 3D
gara agaIji Arduino hazie ihe
-esonụNa-arụ ọrụ na France A2-B1